Wararka - CIAAR 2020 【Bandhiga Live】
Bishii Noofambar 12, 2020, Bandhiggii 18aad ee Caalamiga ah ee Hawada Baabuurta ee Shanghai iyo Bandhigga Farsamada Qaboojiyaha ayaa si weyn u furmay. Iyada oo horumarka degdegga ah ee warshadaha baabuurta ee Shiinaha, warshadaha qaboojiyaha guur -guura ee Shiinaha ayaa muujinaya isbeddel horumarineed oo degdeg ah. Xidhiidh kasta oo ka yimaadda wax-soo-saarka, iibinta ilaa iib-iibinta ka dib ayaa noqonaya mid sii qaan-gaadha. Shuruudaha qaran ee kaarboon-yar-yar iyo ilaalinta bay'ada ee waxsoosaarka warshadaha ayaa si joogto ah u soo hagaagaya, taas oo dardar gelinaysa hal-abuurka alaabta ganacsiga iyo kor-u-qaadista warshadaha.
Bandhigga Teknolojiyadda Hawada Gawaarida Caalamiga ah ee Shanghai iyo Qaboojiyaha Farsamada Qaboojintu waa buundada isgaarsiinta macluumaadka warshadaha oo wanaagsan, oo keenta wadaagista teknolojiyadda ee alaabada qaboojiyaha baabuurta ee baabuurta. Laga soo bilaabo dhinacyada dariiqyada farsamada iyo rajooyinka dalabka warshadaha, si guud oo qoto dheer loo fasirayo aragtida hore loo eegayo ee duurka baabuurta ee alaabada qaboojiyaha. Dadka ku jira arimahan ayaa sidoo kale halkaan ka helay waxbarasho dheeri ah iyo is dhexgal si dadku u balaariyaan ganacsigooda.
Shirkaddayadu waxay ka qaybgashay Bandhigga Teknolojiyadda Hawada Gawaarida Caalamiga ah ee Shanghai iyo Qaboojiyaha Farsamada Qaboojinta sanado badan oo leh alaabada kombaresarada hawo qaboojiyaha. Jawiga guud ee cudurkan faafa, macaamiil badan oo gudaha iyo dibaddaba ah ayaa weli soo jiitay bandhiggan saddexda maalmood. Isgaarsiinta iyaga, dhaqanka shirkadda ayaa la gaarsiiyay, muuqaalka shirkadda iyo alaabada cusub ayaa la soo bandhigay, macaamiishana waxaa lagu casuumay inay soo booqdaan warshadda oo ay si qoto dheer noo bartaan si loo hagaajiyo kalsoonida macaamiisha ee sumadda iyo in la dhiso kalsoonida macaamiisha shirkadeena. Si loo doorto badeecado ku habboon macaamiisha oo loo hubiyo tayada adeegga, waxaan soo saarnaa oo aan la macaamilnaa macaamiisha goobta bandhigga, waxaan u adeegsannaa tallaabooyin wax ku ool ah si loo xalliyo dhibaatooyinka macaamiisha loona daboolo baahiyaha macmiilka.
Goobta carwadu ka dhacday ayaa waxaa buux dhaafiyay dadweyne aad u fara badan oo si xowli ah ku socday. Waxaa jiray macaamiil aan dhammaad lahayn oo ku sugnaa waab 1J02, waxaana jiray macaamiil badan oo la tashaday. Soo dhaweynteena diiran, sharraxaad taxaddar leh oo ku saabsan badeecooyinka kombaresarada hawo qaboojiyaha baabuurta, iyo ku -xiridda wax -ku -oolka ah ayaa ku guuleysatay raalli ahaanshaha macaamiil badan. Aan si toos ah ugu tagno goobta bandhigga!